Mareykanka oo dib u howlgaliyay safaaradii ay ku lahaayeen Soomaaliya 28 sanno kadib - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo dib u howlgaliyay safaaradii ay ku lahaayeen Soomaaliya 28 sanno kadib
October 2, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Calanka Mareykanka. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa sheegay in ay dib u howlgaliyeen safaaradii ay ku lahaayeen Muqdisho, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya maanta oo Arbaco ah.
“Maanta waxaan xaqiijinay xiriirka ka dhaxeeya dadka Mareykanka, dadka Soomaalida, iyo labada dal. Waa arrin muhiim ah oo taariikhi ah taasoo muujinaysa horumarka Soomaaliya ay samaysay sanadihii dhawaa, iyo tilaabo kale oo horey loogu qaaday.” Ayuu war-saxaafadeedka ku yiri safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto.
“Safaarada Soomaaliya ee Muqdisho waxay keenaysaa kor u qaadida xiriirka, ayna horumarinaysaa danaha istiraatiijiyada ee Mareykanka, waxayna gacan ka geysanaysaa dhammaan ammaankeena, siyaasadda, iyo horumarinta dhaqaalaha iyo ujeedooyinka.” Ayuu ku sii daray.
Mareykanka ayaa si rasmi ah u xiray safaaradiisa Muqdisho 5-tii bishii Janaayo, 1991, markaas oo Soomaaliya ay gashay colaad sokeeye.
Madaxweynaha Puntland oo wefdi ka soda UNSOM iyo IGAD kulan kula yeeshay Boosaaso
The White House has granted the U.S. military broader authority to carry out strikes in Somalia against al Qaeda-linked al Shabaab militants, the Pentagon said on Thursday, the latest sign President Donald Trump is increasing [...]
Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Soomaaliya oo yimid Garoowe si ay uga qeybgalaan caleemo-saarka madaxweynaha Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa maanta oo Jimce ah yimid magaalada Garoowe ee caasimada Puntland si ay uga qeybgalaan munaasabada caleemo-saarka madaxweynaha Puntland. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan [...]
Moscow-(Puntland Mirror) Ruushka ayaa bilaabay in uu hoos u dhigo ciidamadiisa iyo diyaaradihiisa ku sugan gudaha dalka Suuriya, sida uu sheegay taliyaha ciidamada qalabka sida ee Ruushka. “Wasaaradda difaaca Ruushku waxay bilowday in ay yarayso [...]